Del.icio.us Firefox အတွက် plug-in Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 14, 2006 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
Social Bookmarking ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ သင်အဖြေကိုသိလျှင်…နောက်စာပိုဒ်သို့သွားပါ။ သင်မလုပ်ပါကအသုံးပြုသူများသည် bookmark link များအချင်းချင်းကိုမျှဝေရန်နှင့်မျှဝေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ Del.icio.us ၎င်းသည် link များကိုမျှဝေရန်နှင့် 'tag' ရန်ခွင့်ပြုသည့်ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏လင့်ခ်များကိုမှတ်သားခြင်းကသင် Del.icio.us interface ကို အသုံးပြု၍ သင်ရှာဖွေနေသော link များကိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည်။
ငါကအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ပန်ကာမဟုတ်ဘူး Del.icio.us ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ကျမကသူတို့ရဲ့အပိုတွေအားလုံးကိုနှစ်သက်ပါတယ် ကျွန်ုပ်၏ပင်မစာမျက်နှာပေါ်ရှိ Del.icio.us အတွက် WordPress ဝစ်ဂျက်ကိုတွေ့လိမ့်မည် Automattic အဆိုပါ sidebar ကိုဝစ်ဂျက် plugin ကိုအတူ) ။ အဖြစ်ကောင်းစွာသင်ကငါ၏အ feed ကိုသုံးပြီးပေါင်းစည်းမြင်ပါလိမ့်မယ် Feeburner's Link Splicer.
Del.icio.us ကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးမှာ Firefox Plugin ဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်သတိပြုပါ၊ ငါ့လိပ်စာဘားတွင်“ Tag” ခလုတ်ကိုကျွန်ုပ်ထည့်ပြီးပြီ။ ထိုခလုတ်ကိုသင်နှိပ်လိုက်ပါကသင်၏ Del.icio.us စာကြည့်တိုက်သို့ URL ကိုမှတ်သားခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းအတွက်ဖြည့်နိုင်သည်။
သင်သတိမပြုမိစရာကောင်းသည့်စွမ်းဆောင်ချက်တစ်ခု - အကယ်၍ သင်သည်စာမျက်နှာပေါ်ရှိစာသားအချို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီး“ Tag” ကိုနှိပ်ပါက၎င်းသည်မှတ်သားထားသည့်စာသားကို Notes နေရာတွင်အလိုလျောက်ကူးထည့်ပေးလိမ့်မည်။ Nice နည်းနည်းအင်္ဂါရပ်များနှင့် timesaver! အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံ။